Qaar ka mid ah goobaha ganacsiga degmada Afgooye oo maanta xiran | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Qaar ka mid ah goobaha ganacsiga degmada Afgooye oo maanta xiran
Qaar ka mid ah goobaha ganacsiga degmada Afgooye oo maanta xiran
Wararka laga helayo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in Maanta ay xiran yihiin inta badan Goobaha Ganacsiga ee ku yaal degmadaas Sababo la xiriira xiisad halkaas ka taagan.
Sababaha Goobaha Ganacsiga Afgooye Maanta u xiran yihiin ayaa waxaa lagu sheegay kadib markii maleeshiyaad hubeysan lagu arkay Wadda u dhexeysa Labada buundoee degmada Afgoye.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Afgooye ayaa warbaahinya gudaha u sheegeen in maleeshiyadka ay ka careysan yihiin burburin ay ka war heleen in lagu sameeynayo Guryo ku yaal Xaafada waanjeel ee ku taal Waaxda 21 Octoober ee Degmada Afgooye.
Maamulka degmada Afgooye iyo laamaha Amniga degmadaas weli kama hadlin xiisadaan,Shalay ayaana waxaa degmada Afgooye ka dhacay dibadbax ay dhaigayeen dadka ku nool Xaafada waanjeel ee Waaxda 21 Octoobar, kuwaas oo sheegayay in aysan marnaab aqbaleyn in Guryahooda la burburiyo.
Previous articleGalmudug oo sheegtay inay gobolka Mudug kaga adkaadeen Al-Shabaab
Next articleDHAGEYSO:Daawooyinka tallaalka COVID19 oo dheeraad ah oo berri dalka la keenaya